Super Pinhole Macula Cabinet
This cabinet can assist with testing potential visual acuity when considering cataract surgery for patients with retinal disease, such as macular degeneration. This greatly improved Super Pinhole Macula provides uniform illumination across the entire chart. LED lights provide increased bulb life and universal power supply (110V). Sloan letter chart is included. For testing at 1.5 m.
Super Pinhole Charts (Letters)
Proportionally-spaced lines. Line sizes range from 20/100 to 20/20. For testing at5ft.
Super Pinhole Charts (Numbers)
Redesigned with nasal slits - cut in the patch - forabetter fit close to the nose. 3-5/8&quot; x 2-1/4&quot; (85 x 59 mm) Recommended for ages over4years 50 individually wrapped patches per box5Designs with soft, textured accents: Airplanes Skulls Space Ships Footprints Race Car
NE-C801 ကိုပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ၊ နာတာရှည် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ လေပြွန်ရောင်ခြင်းနှင့် အခြားသောအသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများအတွက် ထိရောက်သော ကုသခြင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ • ဆေးအငွေ့ရှုသွင်းရာတွင်လိုအပ်သော ပမာဏကို ရရှိစေပြီး ဆေးအငွေ့ဆုံးရှုံးမှုကိုတားဆီးပေးခြင်း • ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းခြင်းနှင့် လွယ်ကူစွာပြန်လည်သန့်စင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း ကျစ်လျစ်သောဒီဇိုင်း အသံငြိမ်သောစက်၏လုပ်ဆောင်ချက် ထိရောက်သောဆေးအငွေ့ရှုသည့်နှုန်း -0.3ml/min ထိရောက်သောကုသမှုအတွက်သေးငယ်သောအမှုန်အရွယ်အစား - 3um Omron V.V.T (Virtual Valve နည်းပညာ) ကိုအသုံးပြုထားသောဆေးအငွေ့ရှုစက် ဆေးအငွေ့ရှုစက်တွင်ပါဝင်သောအဆို့ (Valves) ကပါးစပ်မှရှုသောကိရိယာ (mouthpiece) မှတဆင့်ဆေးအငွေ့ကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါသည်။ အသုံးပြုသူအနေဖြင့် အသက်ရှုရင်း တပြိုင်နက် ဆေးအငွေ့ကိုရှုသွင်းခြင်းဖြင့် ဆေးငွေ့ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ကျစေနိုင်ပါသည်။ ဆေးအငွေ့ရှုစက်အများစုတွင် ဆီလီကွန်အဆို့ (silicon valves) များထည့်သွင်းအသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်။ Omron ဆေးအငွေ့ရှုစက်များတွင် ဆီလီကွန်အစို့ (silicon valves) များမပါဝင်သော Omron ၏ မူပိုင်နည်းပညာက အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ဆီလီကွန်အဆို့(Silicon Valves) မပါခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ • ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းခြင်းနှင့် အလွယ်တကူပြန်လည်သန့်စင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း • ကလေးငယ်များမြိုချနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသော အပိုင်းအစများမထွက်နိုင်ခြင်း • ပိုးသတ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် ပိုးမွှားကူးစက်မှုမရှိခြင်း
ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းတာရန်အပြင် ပိုမိုသောလုပ်ဆောင်ချက်များ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှု - ကိုယ်တွင်းအဆီပမာဏရာခိုင်နှုန်း၊ ကိုယ်တွင်းကလီစာများ၏အဆီပမာဏ၊ အရေပြားအောက်ရှိအဆီပမာဏနှင့် အရိုးကြွက်သားဖွဲ့စည်းမှု ပမာဏရာခိုင်နှုန်းတို့ကိုသိရှိထားခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်သောခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းမှုကိုရရှိစေပါသည်။သတ်မှတ်ချက်များ &quot;ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအာရုံခံပေးနိုင်သောနည်းပညာ&quot;ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့်တိကျမှန်ကန်သော ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားအဖြေကိုရရှိစေနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုလွယ်ကူစေရန်အတွက် • ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအဆီများကို အစိတ်အပိုင်းအလိုက်ဖော်ပြပေးခြင်း(ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံး၊ အလယ်ပိုင်း၊ ခြေထောက်နှင့်လက်မောင်း)၊ အရေပြားနှင့်အရိုးကြွက်သားဖွဲ့စည်းမှု ပမာဏရာခိုင်နှုန်းတို့ကိုဖော်ပြပေးခြင်း • ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းမှုအခြေအနေတိုးတက်မှု ရှိ/မရှိ ကိုဇယားနှင့်တကွဖော်ပြပေးခြင်း • ကျစ်လျစ်သောဒီဇိုင်းနှင့်စက်အလေးချိန်ပေါ့ပါးခြင်း • လက်ရှိအသက်နှင့် ကိုယ်တွင်းဇီဝကမ္မအသက်တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြပေးခြင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနှင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိအဆီများကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးပါ • ကိုယ်အလေးချိန်ကိုပြသပေးခြင်း • ခန္ဓာကိုယ်သိပ်သည်းဆ • ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရှိ အဆီပမာဏရာခိုင်နှုန်း • ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအလိုက်အရေပြားအောက်ရှိ အဆီနှင့် အရိုးကြွက်သားဖွဲ့စည်းမှုပမာဏ (ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး၊ အလယ်ပိုင်း၊ ခြေထောက်နှင့်လက်မောင်း) • ခန္ဓာကိုယ်တွင်ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုပမာဏ • ကိုယ်တွင်းဇီဝကမ္မအသက် • ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ကလီစာများ၏အဆီပမာဏ • လက်ရှိအသက်နှင့်ဇီဝကမ္မအသက်တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြချက် • ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေပြဇယား • ရက်ပေါင်း(၉၀)အတွင်းတိုင်းတာချက်များကိုမှတ်သားပေးထားနိုင်ခြင်း
ချောမွေ့တောက်ပြောင်တယ်။ စတိုင်ကျ လှပတယ်။ သိပ်သည်းကျစ်လှစ်ပြီး နေရာသိပ်မယူတဲ့ အနှိပ်ထိုင်ခုံ အမျိုးအစားပါ။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားဖို့အတွက် OGAWA မှ Smart Vogue Massage Chair ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဦးခေါင်းပိုင်းမှ ခြေထောက်အထိ ထိရောက်ကောင်းမွန်စွာ နှိပ်နှယ်ပေးနိူင်တာကြောင့် ပင်ပန်းညောင်းညာမှုတွေကို အမှန်တကယ်ပြေလျော့စေမှာပါ။ Triple S-Track နှင့် Intelligent Motorised Timer (IMT) နည်းပညာတို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင်နှိပ်နှယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းအညောင်းအညာ ပြေစေရန်အတွက် တင်ပါးအနီးရှိ မီးညှောင်ရိုးကို အဓိကထား နှိပ်နှယ်ပေးနိူင်တာကလည်း Smart Vogue ရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ # Sleek, stylish and compact, the all new Ogawa Smart Vogue is designed to complement today’s urban lifestyle, renewing your sense of well-being from head to toe. With its revolutionized Triple S-Track and the humanised Intelligent Motorised Timer technology (IMT), your body will be put at the utmost relaxed state and enjoyaholistic human live massage focusing on the tailbone until hips. This is the beauty of Smart Vogue. OGAWA Smart Vogue ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ နီးစပ်ရာ OGAWA Showroom တွေမှာ လာရောက်လေ့လာစမ်းသပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက် ရပါတယ်ခင်ဗျာ။OGAWA Showroom မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ သိလိုသည်များကို OGAWA ၏ Facebook စာမျက်နှာ www.facebook.com/OGAWAMyanmar တွင် ၀င်ရောက်ရေးသား၍ဖြစ်စေ၊ (01) 654 701~5 Ext (601), 09 431 68 234 စတဲ့ဖုန်းများသို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိူင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
OGAWA Mobile Seat XE plus သည် ကျောရိုးတစ်လျှောက် ညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်း၊ ဇက်ကြောတက်ခြင်းများကို ပြေလျော့သက်သာစေရန် အထိရောက်ဆုံးနှိပ်နယ်ပေးပြီး Infrared Heat Function ပါဝင်သည့်အတွက် ခါးနာ၊ ခါးကိုက်ဝေဒနာများကို ပြေလျော့သက်သာစေပါသည်။ Mobile Seat XE Plus ကိုကားပေါ်တွင်လည်း Cigarette Lighter Socket ဖြင့်တွဲဖက်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။OGAWA Mobile Seat XE plus ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ နီးစပ်ရာ OGAWA Showroom တွေမှာ လာရောက်လေ့လာစမ်းသပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက် ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
OGAWA မှ အသစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်သော Smart Delight Plus ထိုင်ခုံသည် Quadro နည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ထိရောက်စွာနှိပ်နယ်ပေးနိုင်သည့်အပြင် အလင်းကုထုံး (Light Therapy) တို့ပါဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင် MP3၊ iPod တို့နှင့်တွဲဖက်၍ အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက် အနှိပ်ခံနေစဉ် အတွင်း မိမိနှစ်သက်ရာ တေးသီချင်းများကိုနားဆင်နိုင်ပါသည်။OGAWA Smart DeLight Plus ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ နီးစပ်ရာ OGAWA Showroom တွေမှာ လာရောက်လေ့လာစမ်းသပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက် ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
OGAWA ezTone သည် High Performance Oscillator တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို Vibrate (တုန်ခါမှု) ဖြစ်စေတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အဆီပိုတွေကို ချေဖျက်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချို့သော ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မချေဖျက်နိုင်သော အဆီပိုများကိုလည်း ချေဖျက်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို တုန်ခါစေခြင်းဖြင့် • ခန္ဓာကိုယ်သွယ်လျလှပလာစေခြင်း • သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေသည့်အပြင် အဆိပ်အတောက်များကိုလည်းလျော့နည်းစေခြင်း • စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများကိုလျှော့ချပေးခြင်း • ကြွက်သားများကိုသန်မာစေခြင်း • ကိုယ်နေဟန်ထား ကျစ်လျစ်သွယ်လျစေခြင်း • ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အဆီပိုများကို လောင်ကျွမ်းစေသောကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းသိမ်းပေးခြင်း • အရိုးများသန်မာစေခြင်း • ခန္ဓာကိုယ် ညောင်းညာနာကျင်မှုများကိုသက်သာစေခြင်း ...... စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျယ်ပြန့်တဲ့မျက်နှာပြင် (vaster workout area) နဲ့အတူ running, jogging, walking ဆိုပြီး area ၃ မျိုးပါတဲ့အတွက် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Vibration intensity ကိုရွေးချယ်ပြီး အဆင်ပြေသလို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ezTone ကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အတူ တွဲဖက်ကစားနိုင်သလို လက်မောင်းသားတွေ ကျစ်လျစ်လှပအောင် ကစားနိုင်တဲ့ resistance cord system လည်းပါဝင်ပါတယ်။ Wireless controller ပါတဲ့အတွက် လိုအပ်သလို ထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့အတူ စက်အောက်ခြေမှာ roller ပါဝင်တာကြောင့် အသုံးပြုသူတွေအတွက် သယ်ယူသိမ်းဆည်းရ လွယ်ကူစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Introducing the all-new OGAWA ez-Tone, an advanced oscillator designed to use whole body vibration to help your body break and eliminate stubborn fats easily, shaping it into your desired figure as well as giving you various health boosts, without needing to leave the comfort of your home. OGAWA Showroom မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ သိလိုသည်များကိုOGAWA ၏ Facebook စာမျက်နှာ www.facebook.com/OGAWAMyanmar တွင် ၀င်ရောက်ရေးသား၍ဖြစ်စေ၊ (01) 654 701~5 Ext (601), 098615590 စတဲ့ဖုန်းများသို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိူင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ OGAWA ezTone ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ နီးစပ်ရာ OGAWA Showroom တွေမှာ လာရောက်လေ့လာစမ်းသပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက် ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
OGAWA ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Foottee Therapy – Foot Reflexology ဟာဆိုရင် ခြေချောင်းလေးတွေမှစ၍ ခြေဖနောင့်အထိ ထိထိရောက်ရောက် နှိပ်နယ်ပေးနိုင်အောင် တီထွင်ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Foottee Therapy ကို ဖိနပ်စီးသလိုစွပ်ထားလိုက်ရုံနဲ့ ခြေဖ၀ါး၊ ခြေဖနောင့်နဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ထုံကျင်ကိုက်ခဲမှု၊ ညောင်းညာနာကျင်မှုတွေကို အထိရောက်ဆုံး နှိပ်နယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျော့ချပေးနိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အထိုင်များသူတွေ၊ ကွန်ပျူတာ အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးသူတွေ၊ ဖိနပ်အမြင့်စီးတဲ့သူတွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် လန်းဆန်းအပန်းပြေလိုသူတွေအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။ Foottee Therapy – Foot Reflexology ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ နီးစပ်ရာ OGAWA Showroom တွေမှာ လာရောက်လေ့လာစမ်းသပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက် ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
DreamStation is responsive, informative, easy-to-use and connects remotely to your care team. In every way, it is designed to make it comfortable to help you stay committed to treating your sleep apnea.The colorful display features an icon-based navigation system.Among the leading CPAP brands, DreamStation feature comprehensive selection of wireless options – including Bluetooth, Cellular and WiFi.Performance Check – gives you peace of mind by simplifying in-home evaluation and troubleshooting, while confirming every morning that your device was working properly through the night.Provides maintenance alerts and reminders every 30 days.
Hifi Auto System ပါရှိပြီး(Mp3)နှင့်ဂီတနားထောင်၍ အနှိပ်ခံခြင်း၊ခြေသလုံးနှင့်လက်တို့အား လေဖိအားနှင့်နှိပ်ပေးခြင်းဖြင့် အကြောများပြေလျော့စေခြင်း၊vibration ဖြင့်တင်ပါးအား နှိပ်ပေးခြင်း။2D အနှိပ်ကိရိယာဖြစ်၍တစ်နေ့တာဆုံးရှုံးသွားသောစွမ်းအင်ကိုပိုမိုရရှိစေသည့်အပြင် စက်၏ဘေးဆိုးကြောင့်အိုမင်းမှုအန္တရာယ်မရှိဘဲ အပူနှင့်ရောင်ခြည်ပါသောကူရှင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်စိတ်ချယုံကြည်စွာအသုံးပြုနိုင်သောစက်ဖြစ်သည်။